Duufaannada Dagaalka: Musuqmaasuqu waa mid u Dhexeeya Hay'adda - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Annaga barayaasha nabadda waa inaan bilownaa baaritaan ku saabsan dabeecadda musuqmaasuqa ee dhammaan dagaallada, iyo khasaaraha badan ee ka baxsan goobta dagaalka ee ay geysato.
OpEd oo ka socda New York Times (La Dagaalanka Argaggixisada Wuxuu Bilaawday Musuqmaasuq) dib loogu soo dhejiyay, sida mid kale oo dhawaan OpEd soo dhigtay Laila Lalami (Waxa Aan Illowno 9/11 - Macnaha dhabta ah ee 'Waligaa Ha Iloobin') wuxuu ku furmayaa tixraac ku saabsan wiil dhalinyaro ah, mid ka mid ah oo u dhinta geerida diyaaradda uu ku dhegganaa, isagoo quus ka jooga inuu ka baxsado masiirka kuwa qaatay fursadaha doorashada ee ay hadda mamnuucday Daalibaan; midda kale oo ah dhallinyaro fursadda ku hadasha oo Ingiriis ah oo shaqadiisii ​​mushaharka sarraysay u dulqaatay sidii turjubaan u galay hanti aad u ballaaran. Mid kastaa wuxuu u taagan yahay cawaaqib la taaban karo 20-kii sano ee Dagaalkii Argagixisada ee horseeday masiibada bani'aadamnimada ee naxdinta leh ee hadda Afgaanistaan ​​qabsatay; burburka dammaanadda iyo musuqmaasuqa, laba asaasi ah, si ula kac ah u qarsoonaa dhammaan dagaalladii. Maraykanka iyo NATO, ma jiri karaan kafaaro gud ah oo keliya roobabka masiibooyinka burburinta dammaanadda, annaguna annaga, muwaadiniinta dalalkaas ma eegi karno runta musuqmaasuqa ee ku jira dagaalka sida lagu sheegay maqaalka Faarax Stockman, sidoo kale runta qoraalkii hore ee Laila Lalami ee ku saabsanaa kharashyada aadanaha.
“Waxyeellada dammaanadda” waa eray-bixin loogu talagalay dhaawacyada “aan la doonayn” iyo burburinta dhulalka “aan la beegsan”, kaabayaasha, iyo hababka kale ee hab-nololeedka, burburka joogtada ah, cawaaqibka la saadaalin karo ee iskahorimaadyada hubeysan. Beerihii burburay ee Faransiiska, burburkii London oo aad loo qarxiyey, oo lagu bartay muuqaalada filimkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka; sawirrada carruurta jir -dhiska leh; gabar yar, oo argagax ku ordaysa, dhibane bamka napalm, sawirro laga soo qaaday dagaalladii Bartamaha Ameerika iyo Fiyatnaam; weerar xagga cirka ah, oo aargudasho u ah weerarkii Daacish ee lagu dilay toban ka mid ah ciidamada badda ee Mareykanka, garoonka diyaaradaha ee Kabul oo lagu dilay shaqaale samafal iyo qoyskiisa halkii uu ka ahaan lahaa qorsheeyihii weerarka garoonka; iyo wiil yar, oo ku dhinta diyaarad ka dhoofaysa gegida diyaaradaha “dhammaadka” dagaalka Afgaanistaan ​​dhammaantood waa astaamo xun oo waxyeello dammaanad ah. Waxaa nalagu qasbay inaan aqbalno xasuuqyada noocaas ah sida “wax laga xumaado laakiin lama huraan ah” (halkan lama huraanka ah dareenkeeda asaasiga ah ee lama huraanka ah) masiibooyin, oo muhiim u ah raacitaanka ujeeddooyinka sare ee kiciyayaal dagaalku ku baaqaan, dhif iyo naadir kaliya “difaaca danaha qaranka, ”Marar badan, difaaca ilbaxnimada ama erayga u dhigma qowmiyadda,“ Jidkayaga Nolosha, ”oo ay ku hanjabeen xoog xun oo ay tahay in“ la jabiyo. ” Waxaa naloo tiriyay xadgudubyadan oo ah qiimaha lagama maarmaanka u ah “difaaca” qarniyo badan, sannadaha oo dhan waxaan rumaysnayn daruuri- iyo lama huraan- dagaal.
Waxaan si aad ah u yaqaanaan sawirrada mararka qaarkood muujinaya qoraallada taariikhda ee ka -faa'iideystayaasha wax -ku -oolka ah ee "sameeyayaasha hubka," oo aad ugu sarreeya faa'iidooyinka laga helay dagaalladii hore. Muwaadiniinta qaarkood waxay yaqaanaan wax ka mid ah nasiibkii laga sameeyay warshadaha hubka ee Dagaalkii Labaad ee labada dhinac, iyo “macaashka dagaalka.” Maaddaama miisaaniyadda milatariga Mareykanka ay noqoto isha muranka guud ee hadda jira, waxaan bilaabeynaa inaan aragno sida kobcinta dhowr qof oo ka faa'iideysanaya soo saarista aaladaha dhimashada ay u muuqato mid joogto u ah dhaqaalaha dagaalka oo soo ifbaxay muddo dheer ka dib VE (Guusha Yurub) iyo VJ (Guusha Japan) maalmo. Waxaa noo sheegay Ku guuleysan dagaal in gudaha Mareykanka “… ku dhawaad ​​afar iyo toban xubnood oo ka tirsan Kongareeska [oo u codeyn doona miisaaniyaddaas] waxay saamiyo ku leeyihiin shirkadaha hubka… oo qiimahoodu kor u kacay 900% tan iyo bilowgii dagaalka Afgaanistaan.” Nidaamka dagaalka waxaan ku nool nahay faa'idada joogtada ah ee ka timaadda dhibaatada aadanaha ee nooca Naomi Klein ayaa shaaca ka qaadday inay u soo baxdo xilli ahaan "hantiwadaagga musiibada. ” Waxaa nalooga baqayaa inaan aqbalno lama huraanka ah ee waxyeellada dammaanadda maxaa yeelay waxaa jira faa'iido laga helo shirkadda soo saarta dagaal.
Dagaalkii Afgaanistaan, Stockman wuxuu qoray, “Musuqmaasuqu ma ahayn uun cillad xagga dagaalka ah. Waxay ahayd sifo. ” Maalmahan gaarka ah, waa hubaal inaan ku baaqeyno xadgudubyada aadka u daran ee aaminaadda dadweynaha 20 -kii sano ee Mareykanka iyo NATO "dagaalka ka dhanka ah argagixisada," annagoo si buuxda u qiimeyneyna dhammaan kharashyada. Weydiintaasina waxay u baahan tahay in la sii qoto dheereeyo oo la ballaariyo. Annaga barayaasha nabadda waa inaan sidoo kale bilownaa baaritaan ku saabsan dabeecadda musuqmaasuqa ee dhammaan dagaallada, iyo waxyeelada badan ee ka baxsan goobta dagaalka ee ay geysato. Sidii aan dhowaan ugu yeernay dib -u -eegis ku saabsan waxa aan xusuusanno, annagoo kor u qaadnay su'aasha ah in xusuus -qoryada qaarkood la baabi'iyo, waxaan hadda ku baaqeynaa in si firfircoon oo ula kac ah looga fiirsado hay'adahayaga aadka loo loolansan yahay oo u muuqda kuwo cilladaysan, midkoodna ma aha dagaal mooyaane, la beddelo oo ay tahay in la tirtiro. Sidii had iyo jeerba, arrinta ujeeddooyinka iyo shaqooyinka waa in kor loo qaadaa, laakiin waxaa ka sii degdeg badan qiimaynta anshaxa ee la samaynayo. Marka shaqooyinka iyo cawaaqibta hay'addu ay yihiin, marka la eego dhammaan heerarka, oo lid ku ah wanaagga dadweynaha iyo qiyamka la sheegay inay bulshada dhexdeeda ka yihiin, markaa waa in la tirtiro. Waa inaan raacnaa daraasad dhab ah oo nidaamsan oo ku saabsan beddelka dagaalka. (BAR, 9/18/2021)
La Dagaalanka Argaggixisada Wuxuu Bilaawday Musuqmaasuq
Musuqmaasuqu ma ahayn cillad xagga dagaalka ah. Waxay ahayd muuqaal naqshad.
Waxaa qoray Faarax Stockman, New York Times
(Waxaa daabacay: New York Times. Sebtember 13, 2021)
Dagaalkii Afgaanistaan ​​ma ahayn mid fashilmay. Waxay ahayd guul baaxad leh - kuwa nasiib u yeeshay.
Tixgeli kiiska Hikmatullah Shadman, oo ahaa dhalinyaro markii ay Ciidamada Gaarka ah ee Maraykanku ku soo duuleen Kandahar cidhibtii Sebtember 11. Waxay u kiraysteen turjubaan ahaan, isaga oo siin jiray ilaa $ 1,500 bishii - 20 jeer mushaharka sarkaalka bilayska maxalliga ah, isaga oo ku jira New Yorker. Dhamaadkii 20 -meeyadii, wuxuu lahaa shirkad xamuul ah oo bixisa saldhigyada millatariga Mareykanka, isagoo kasbaday in ka badan $ 160 milyan.
Haddii shiil yar sida Shadman uu taajir ka noqon karo dagaalka ka dhanka ah argagixisada, bal qiyaas inta Gul Agha Sherzai, oo ah dagaal-ooge waqti-dheer isu rogay guddoomiye, uu dhex galay tan iyo markii uu ka caawiyay CIA-da inay Taliban ka saaraan magaalada. Qoyskiisa ballaaran ee ballaadhnaa waxay wax walba ka soo qaadeen quruurux ilaa alaab guri ilaa saldhigga milatari ee Kandahar. Walaalkiis ayaa maamulayay garoonka diyaaradaha. Cidina ma oga inta uu qiimihiisu yahay, laakiin waxaa cad inay tahay boqolaal milyan - oo ku filan inuu ka hadlo a $ 40,000 oo ah dukaamaysiga Jarmalka sida haddii uu is -beddel jeebka ku bixinayey.
Hoos ka eeg daboolka “dagaalka wanaagsan”, tanina waa waxa aad aragto. Afgaanistaan ​​waxaa loo malaynayay inay ahayd dagaal sharaf leh si looga takhaluso argagixisada loona badbaadiyo gabdhaha kooxda Taliban. Waxaa loo malaynayay inay tahay dagaal aan ku guuleysan karno, haddii aysan ahaan lahayn carqaladeynta Ciraaq iyo musuqmaasuqa rajada ka qaba dowladda Afgaanistaan. Laakiin aan dhab ka helno. Musuqmaasuqu ma ahayn cillad xagga dagaalka ah. Waxay ahayd muuqaal naqshad. Talibaan ma ridin. Waxaan siinnay dagaal -oogayaasha boorsooyin lacag caddaan ah si aan u sameyno.
Markii mashruuca qaran-dhisku socday, dagaal-oogayaashii waxay isu beddeleen guddoomiyeyaal, jeneraalayaal iyo xubnaha Baarlamaanka, lacagihii caddaanka ahaana way sii socdeen.
Sarah Chayes, oo hore u ahayd kaaliyaha gaarka ah ee hoggaamiyayaasha ciidamada Mareykanka ee Kandahar, ayaa reer galbeedku inta badan madaxooda ku xoqeen awood la'aanta joogtada ah ee hay'adaha maamulka Afgaanistaan. Arimaha Dibadda. “Laakiin shabakadaha casriga ah ee gacanta ku haya hay'adahaas waligood uma jeedin inay maamulaan. Ujeedadoodu waxay ahayd is-kobcin. Hawshaasna, waxay si cajiib ah ugu guuleysteen. ”
Halkii qaran ahaan, waxa aan runtii dhisnay waxay ahaayeen in ka badan 500 saldhig millatari - iyo nasiibka shaqsiyeed ee dadka iyaga siiyey. Taasi had iyo jeer waxay ahayd heshiiska. Bishii Abriil 2002, Xoghayaha Difaaca Donald Rumsfeld wuxuu soo saaray qoraal qarsoodi ah oo ku amraya kaaliyayaasha inay la yimaadaan “qorshe ku saabsan sida aan ula macaamili doonno mid kasta oo ka mid ah dagaal-oogayaasha-yaa ka helaya lacag yaa, maxaa ku saleysan, ku beddel maxaa, waa maxay quid pro quo, iwm, ”sida laga soo xigtay Washington Post ayaa.
Dagaalku wuxuu faa'iido weyn u noqday dad badan oo Mareykan ah iyo reer Yurub ah, sidoo kale. Mid 2008 waxbarasho ayaa lagu qiyaasay in boqolkiiba 40 lacagtii loo qoondeeyay Afgaanistaan ​​ay dib ugu noqotay waddamada deeqda bixiya macaashka shirkadaha iyo mushaharka lataliyayaasha. Kaliya ku saabsan 12 boqolkiiba gargaarka dib -u -dhiska Mareykanka la siiyay Afgaanistaan ​​intii u dhaxaysay 2002 iyo 2021 dhab ahaantii waxay u tagtay dawladda Afgaanistaan. Inta badan inta kale waxay tageen shirkado sida Louis Berger Group, oo ah shirkad dhisme oo fadhigeedu yahay New Jersey oo heshay qandaraas $ 1.4 bilyan ah oo lagu dhisayo iskuulo, xarumo caafimaad iyo waddooyin. Xitaa ka dib markii la qabtay laaluushka saraakiisha iyo si habsami leh u buux -dhaafiya cashuur -bixiyeyaasha, ka qandaraasyadu way soo socdeen.
Jonathan Goodhand, oo ah borofisar ku takhasusay iskahorimaadyada iyo daraasadaha horumarinta ee Jaamacadda SOAS ee London, ayaa igu qoray: iimayl. Dadka Mareykanka ah “waxay farta ku fiiqaan Afgaanistaan, iyagoo iska indha -tiraya doorkooda ku aaddan shidaalka iyo ka -faa'iideysiga bam -gacmeedka.”
Yaa ku guuleystay dagaalka argagixisada? Qandaraasleyda difaaca Mareykanka, oo badankoodu ahaa shirkado siyaasad ahaan ku xiran oo ku deeqay ololihii madaxtinimada George W. Bush, sida laga soo xigtay Center for Integrity Public, oo ah hay’ad aan macaash doon ahayn oo dabagal ku sameysay kharashaadka warbixinno taxane ah oo la yiraahdo Dabaylaha Dagaalka. Hal shirkadda loo shaqaaleeyey si ay uga caawiso la -talinta wasaaradaha Ciraaq waxay lahaayeen hal shaqaale: seyga ku -xigeenka kaaliyaha xoghayaha difaaca.
Mudane Bush iyo saaxiibbadiis, dagaalladii Ciraaq iyo Afgaanistaan ​​wax weyn bay ka gaareen. Wuxuu fursad u helay inuu ka ciyaaro nin adag TV -ga. Wuxuu noqday madaxweyne dagaal, taas oo ka caawisay inuu mar labaad ku guuleysto doorashada. Waqtiga ay dadku ogaadeen in dagaalka Ciraaq lagu qaaday iska -yeelyeel been ah iyo dagaalka Afgaanistaan ​​ma lahayn qorshe ka bixitaan sharaf leh, waa goor dambe.
Waxa ka muuqda dagaalka Afghanistan waa sida ay tahay noqday dhaqaalaha Afgaanistaan. Ugu yaraan Ciraaq waxay lahayd saliid. Afgaanistaan, dagaalku wuxuu hoos u dhigay dhaqdhaqaaq kasta oo dhaqaale, marka laga reebo ganacsiga opium -ka.
In ka badan labaatan sano, dawladda Maraykanka la qaatay $ 145 bilyan oo ku saabsan dib -u -dhiska iyo gargaarka iyo $ 837 bilyan oo dheeraad ah oo ku aaddan dagaalka dagaalka, oo ah waddan uu GDP -gu u dhexeeyey $ 4 bilyan iyo $ 20 bilyan sannadkiiba.
Kobaca dhaqaalaha ayaa kor u kacay oo hoos u dhacay tirada ciidamada shisheeye ee dalka jooga. Waxaa korodhay Xilligii uu Madaxweyne Barack Obama ku jiray qalliinkii 2009, kaliya wuxuu ku dhacay hoos u dhaca laba sano kadib.
Bal qiyaas waxa dadka reer Afgaanistaan ​​ee caadiga ahi samayn lahaayeen haddii ay awoodaan inay lacagtaas u adeegsadaan mashaariicda muddada dheer la qorsheeyey oo lagu fuliyay xawligooda. Laakiin hoog, siyaasad -dejiyeyaasha Washington waxay ku degdegeen inay lacag caddaan ah albaabka ka saaraan, maadaama lacagtii lagu kharash gareeyay ay ahayd mid ka mid ah cabbirrada guusha.
Lacagta ayaa loogu talagalay in lagu iibsado amniga, buundooyinka iyo warshadaha korontada si loo kasbado qalbiyada iyo maskaxda. Laakiin xaddi lacageed oo is -dhiibay ayaa halkii ka sumeeyey dalka, taas oo ka cadhaysiisay kuwa aan heli karin isla markaana ka dhex -abuurtay iska -horimaadyo kuwii sameeyey.
“Lacagta la bixiyay waxay aad uga badnayd Afqaanistaan,” ayuu ku soo gabagabeeyay kormeeraha guud ee dib u dhiska Afghanistan warbixintii ugu dambeysay. “Mala -awaalka aasaasiga ah wuxuu ahaa in musuqmaasuqa ay abuureen shaqsiyaad reer Afgaanistaan ​​ah iyo in faragelinta deeq -bixiyeyaashu ay ahaayeen xalka. Waxay qaadan doontaa sanado in Mareykanku ogaado inay ku sii hurineyso musuqmaasuqa qarashka xad -dhaafka ah iyo kormeer la'aanta. ”
Natiijadu waxay ahayd dhaqaale khiyaali ah oo u shaqaynayay sidii casino ama a Nidaamka Ponzi ka badan dal. Waa maxay sababta loo dhisayo warshad ama loo beero dalagyo marka aad ka heli karto hanti aad u qurux badan oo iibiya wax kasta oo Mareykanku doonayo inuu iibsado? Maxaad ula dagaallameysaa Daalibaan marka aad lacag uun siin karto si aysan u weerarin?
Lacagtu waxay sii hurisay iriddii dagaalka ee soo noqnoqonaysay, waxayna kobcisay xagjiriintii loogu talagalay inay la dagaallamaan, kuwaas oo weerarradooduna ay marmarsiiyo ka dhigteen wareegyo cusub oo kharash ah.
Xisaabiye maxkamadeed oo ka shaqeeyay koox hawleed milateri oo falanqaysay $ 106 bilyan oo qandaraasyo Pentagon ah ayaa ku qiyaastay in boqolkiiba 40 lacagta ay ku dhacday jeebabka “kacdoon -wadayaasha, kooxaha dambiyada ama saraakiisha Afgaanistaan ​​ee musuqmaasuqa ah,” sida laga soo xigtay Washington Post ayaa.
Saynisyahannada bulshadu waxay magac u leeyihiin waddammada sida aadka ah ugu tiirsan dakhliga aan la kasban ee ka imanaya dibadda: dawladaha rentier. Caadi ahaan waxaa loo adeegsadaa dalalka soo saara shidaalka, laakiin Afghanistan hadda waxay u taagan tahay tusaale aad u daran.
Warbixin waxaa qoray Kate Clark oo ka tirsan Shabakadda Falanqeeyayaasha Afgaanistaan ​​waxay tilmaamtay sida dhaqaalaha Afganistan ee ugu liita u wiiqay dadaalladii lagu dhisayay Dimuqraadiyadda. Maadaama ay lacagtu ka timi shisheeyaha halkii ay canshuur ka qaadi lahayd, hoggaamiyeyaashu waxay u jawaabi jireen deeq -bixiyeyaasha halkii ay ka heli lahaayeen muwaadiniintooda.
Waan ogaa in dagaalka Afgaanistaan ​​uu ka baxay biraha maalintii aan qadada Kabul kula qaatay lataliye reer Yurub ah oo lacag badan la siiyay si uu u qoro warbixinno ku saabsan musuqmaasuqa Afgaanistaan. Waxa uu imaaday uun, laakiin wuxuu hore u haystay fikrado badan oo ku saabsan waxa loo baahan yahay in la qabto - oo ay ka mid tahay in shaqaalaha rayidka ah ee Afgaanistaan ​​laga saaro miisaannada mushaharka ee ku salaysan kala sareynta. Waxaan ka shakisanahay inuusan waligiis heli karin fikrad sidan oo kale ah oo uu ku soo maray dalkiisa. Laakiin Kabul, wuxuu ku dhacay sidii loo qaadan lahaa fikradihiisa. Isaga, Afgaanistaan ​​uma ahayn guul -darro, laakiin waxay ahayd meel lagu iftiimiyo.
Midkoodna ma aha in la yiraahdo dadka Afgaanistaan ​​uma qalmaan taageero, xitaa hadda. Waxay sameeyaan. Laakiin wax intaas ka badan ayaa lagu gaari karaa kharash aad uga yar si ka fikir badan.
Maxay Taliban ka qabsanaysaa dagaalka? Waxay caddaynaysaa inaadan iibsan karin ciidan. Waxaad kiraysan kartaa mid kaliya muddo. Markii lacagtii la damiyay, imisa ayaa ku dheggan si ay ugu dagaallamaan aragtidayada Afgaanistaan? Ma aha Gul Agha Sherzai, qabqable dagaal oo noqday guddoomiye. Waxaa la sheegay inuu ballanqaaday inuu daacad u yahay Taliban.
# kharash gareeynta ciidanka
September 13, 2021 opinion 1
Waxbarashada nabaddu waa inay dib -u -eegis iyo qiimayn ku samaysaa qarashka buuxa ee dhabta ah ee bini -aadamka ee dagaalka. [sii wad akhriska…]
GCPE waxay saxiixday Heshiiska Haweenka, Nabadda, iyo Amniga iyo Waxqabadka Aadminimada. Fadlan nagu soo biir!
July 26, 2021 Digniinta Waxqabadka, Warar & Muuqaal 0
Maaddaama Ololaha Caalamiga ah ee loogu talagalay Nabadda Waxbarashada ay ka muuqato "Haweenka, Nabadda & Amniga iyo Waxqabadka Aadminimada (WPS-HA) Compact," waxaan muujineynaa waajibaadkeena ka qaybgalayaasha bulshada rayidka ah ee adduunka, asalka qaar ka mid ah xeerarka caalamiga ah ee ugu muhiimsan baaqi. GCPE waxay ku boorinaysaa aqristayaasheena & xubnaheena inay u yeeraan dhamaan ururada bulshada rayidka ah ee ay ka shaqeeyaan si ay u saxiixaan ugana mid noqdaan heshiiska. [sii wad akhriska…]